Home Wararka Dalka Sucuudiga oo danjire gaar ah u soo magacawday Soomaaliya
Dalka Sucuudiga oo danjire gaar ah u soo magacawday Soomaaliya
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa Axmed bin Maxamed Al-Muwallad u soo magacowday inuu noqdo safiirkeeda cusub ee uga howlgali doona dalka Soomaalia. Waa markii ugu horeeysay sodomeeyo sano oo ay dowlada Sacuudiga u soo magacaawdo Safiir u gaara dalka Soomaliya. Waxaa horay wakiil uga ahaa safiirkii Sacuudiga u fadhiyay dalka Kenya.
Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan, Binu Cabdulcasiis ayaa aaladda fogaan aragga ku dhaariyay Safiirka cusub, waxaana madasha dhaarinta goobjoog ka ahaa dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Muxamed Bin Salmaan.
Boqortooyada Sucuudiga ayaa safiir rasmi ah u soo magacowday Soomaaliya. Danjiraha la magacaabay Axmed bin Maxamed Al-Muwallad ayaa noqon doona safiirkii u horreeyey ee Muqdisho u fariisan doona 30 sanno kaddib Dowladda Sucuudi Carabiya.